Medical Masiki Manufacturers uye Suppliers - China Factory - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co., Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks > Medical Masks
Masiki ekurapa anonyanya kugadzirwa neketi imwe chete kana kupfuura emachira asina kuvezwa. Iyo huru yekugadzira maitiro ekugadzira masks ekurapa anosanganisira meltblown, spunbond, mhepo inopisa kana acupuncture, nezvimwewo, izvo zvinoenderana nekudzivirira zvinwiwa, kusefa nhundurwa uye mabhakitiriya, uye ndeyekurapa machira ekudzivirira.
Medical mashi Chirungu zita: mask
Medical maski maitiro: nyanzvi yekudzivirira masks kupfekedzwa mune yekurapa rubatsiro
Kurapa mask masikirwo: mask yemaziso uye tension yebhandi
Kurapa mask maseru manejimendi: Kirasi II yezvokurapa zvishandiso
Medical massage kuiswa kwezita: zvinodzivirira zvigadzirwa
Kuumbwa uye basa reMachiremba Masks
Iyo masks ekurapa akaumbwa neyemask mask uye yekunetseka band. Iyo maski yechiso yakakamurwa kuva mukati, pakati uye kunze magadziriso. Iyo yemukati yakasarudzika sanitary sanze kana isina-yakarukwa jira. Mucheka usiri-waakarukwa kana Ultra-mutete polypropylene meltblown zvinhu dura. Iyi inoshanda kwazvo yekudzivirira yekurapa inonyanya hydrophobic uye inofema, uye ine yakakosha kusefa mhedzisiro pahutachiona hutachiona maerosols kana guruva rinokuvadza. Mhedzisiro yekusefa yakanakira, zvigadzirwa zvinoshandiswa hazvina-chepfu uye hazvikuvadze, uye zvakasununguka kupfeka.
Masks ekurapa anogona kudzivirira kutapukira kunokonzerwa nendege yakadzika â ‰ ¤ 5Î¼mg hutachiona hwekutapukira kana padyo nehurefu ((‰ ¤ 1m) kuratidzwa kwezvirwere zvinotakurwa nemarara. Iyo tunhu rekusefa kwehunyanzvi hwe mask yefaira haifanirwe kunge iri pasi pe95%, uye danho redziviriro rakakwira.
Masiki ekurapa ari nani ekuzvidzivirira. Zvinokurudzirwa kuti uzvipfeke kana paine zvakashatisa zvakasvibiswa nharaunda kana chirwere chetachiona (sechirwere chekufema).
â˜ † Dzivirira muviri wemunhu kubva kune zvidimbu zvine mweya
â˜ † Inokodzera kuchengetedzwa kwevashandi vekurapa munzvimbo dzehutachiona
â˜ † Inokodzera kuchengetedzwa kwehutachiona marabhoritari vashandi
â˜ † Kudzivirirwa kwevashandi vakasiyana-siyana panguva yedenda
â˜ † Kuchengetedzwa kwakasiyana kwemauto e biochemical zvombo
Chigadzirwa chinotsanangurwa cheMishonga Masks
Zvinoenderana neyakajairika nyika GB 19083-2003 "Zvekuita zveMagetsi zveMachiremba Ekudzivirira", hukuru hwemasiki ekudzivirira ekurapa ndeaya:
Ukuru hwechikamu chepakati chechikamu mashure mushure mekuparadzirwa: kureba hakuzi pasi pe 17cm, uye hupamhi hausi pasi pe 17cm;
Hupamhi hweyedo-yakakodzera arch masiki: yakatenderera dhayamita haisi pasi pe14cm, uye yakagadzika dhayamita haisi pasi pe 14cm .
Inokosha hwokugadzira zviratidzi Kurapwa Masiki
Kusanganisira isina-oiri svutugadzike kusefa kwakanaka uye kutapukira kwemhepo.
. N95 (Kana FFP2) uye pamusoro.
How ifukidze musoro chifukidzo
(2) Bhendi rakasungirirwa rinosungirirwa mumusoro kuitira kuti mhepo isapinda.
(3) Lower elastic band inosungirwa pamutsipa uye yakasungirirwa.
(4) Ive neshuwa yekuvhura zvakakwana maski yekudzikisa huwandu hwematanda anoshandiswa panguva yekufema.
Mapfekero emhete akavhomorwa-nzeve
(1) Isa chidimbu chako chemhino pane chekumusoro nemaoko kuburikidza nezevezeve, uye isa mask pamhino dzako nemuromo
(2) The earband igadzikwe mujinga nzeve uye kupararira kubva kumusoro kusvika kutsoka kuti mipendero iri chifukidzo vari zvakazara zvakaitika. Izvi zvinobatsira kufukidza kumeso kusvika pakukora uye kurerutsa huwandu hwematanda anodiwa pakufema.
(3) Nyorovera pini yemhino kuti mweya usapinda.
Hot Tags: Medical zvifukidziro, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Factory, Buy, China, Made in China, Price, Price List, Quotation, CE, FDA
Kurapa kuraswaKurapa kunoraswa chirwere chechipisiMedical KN95 chifukidzoKurapa N95 maskMedical kumeso maskKurapa kuraswa kumeso maskKurapa N95 kumeso maskKurapa KN95 kumeso maskKurapa kwema anti-virusKurapa anti-hutachiona kumeso mask